पछिल्लो पटक अद्यावधिक गरिएको: Dec. 27 2017 |2मिनेट पढ्न
डेटिङ लगभग हरेक व्यक्ति एक समय वा अर्को मा त्रासका कम्तिमा केही भावना संग दृष्टिकोण कि ती कुराहरू मध्ये छ. आखिर, सम्बन्ध व्यवहार जटिल छ र कहिले काँही यो अन्य व्यक्ति साँच्चै खोज्दैछ छ कि के बाहिर आंकडा लगभग असम्भव छ. आफूलाई सम्बन्ध संघर्ष पाउन भनेर मानिसहरू अक्सर थप मिति भइरहेको बढी विकल्प दिने महसुस, केवल आफ्नो वृद्धि प्रयास को एक परिणाम रूपमा अझ जटिल विषयहरूमा संग संघर्ष आफूलाई पाउन.
यस हुन्छ कि कारण को एक नम्बर हो, एक अक्षमता देखि लिएर कहिलेकाहीं मानिसहरूले आफ्नो सम्बन्ध पूर्णतया विभिन्न कुराहरू चाहनुहुन्छ भन्ने तथ्यलाई गर्न प्रभावकारी कुराकानी गर्न. राम्रो खबर यो जरूरी यस कठिन हुन छैन भनेर छ.
डर र डेटिङ बाहिर भय लिन तरिका एक शुरुवात मा lighthearted सबै राखन छ. यो ठीक छ कि छ किनभने एक पहिलो तारीख बारेमा डरलाग्दा वा डरलाग्दो हुन कुनै आवश्यकता छैन, एक पहिलो तारीख. कुरा राम्रो जाने छैन भने दोस्रो मिति त्यहाँ हुने कुनै आवश्यकता छ. एक पहिलो तारीख कि व्यक्तिको बारेमा र बारी मा अधिक बाहिर पाउन अर्को व्यक्तिसित खुला र इमानदार कुराकानी गर्ने मौकाको रूपमा हेर्नुभयो गर्नुपर्छ, तपाईं बारेमा थप जानकारी पाउन कि व्यक्तिगत अनुमति.
मान्छे जस्तो देखिने मात्र कुरा भनेर रही छ एक पहिलो तारीख भइरहेको भन्दा बारे थप जोड दिन पहिलो मिति. केही मानिसहरू मिति पछि मिति रही कुनै समस्या छ जस्तो देखिन्छ. अरूले यो अत्यन्तै गाह्रो लाग्छ. यस्ता अवस्थामा यसलाई एक डेटिङ वेबसाइट उपयोग गर्न वा तिर गियर छन् कि घटनाहरु मा सहभागी उपयोगी हुन सक्छ मदत मान्छे एक मिति पाउन. अन्य व्यक्तिहरूलाई अनिवार्य पहिल्यै योजना मिलाइएको र तिनीहरूले अझ परम्परागत फेसन मा एक मिति प्राप्त हुनेछ भन्ने सुनिश्चित गर्न अद्वितीय तरिका पाउन गरिएको छ कि तिथिहरु संग जरूरी सहज छैन. यो विश्वास वा छैन, डेट मा सोधे प्राप्त गर्ने सबैभन्दा ठूलो ठाउँमा एक कुकुर पार्क मा छ.
बरफ टूट एक कुकुर मालिक बारे मा केहि छ. यो केही अन्य विषयमा कुरा गर्न भन्दा आफ्नो पाल्तु जनावर बारेमा कसैसँग कुरा गर्न सजिलो छ. यो तपाईं संभावना केहि पनि सबै मा तपाईं अर्को अवस्था मा भएको थियो भने थिएन कि जब व्यक्ति केही भन्न मौका दिन्छ. सबै कुरा मानिन्छ जब, यो कुकुर पार्क कसैले आकर्षित लिन यस्तो लोकप्रिय ठाँउ कुनै आश्चर्य छ कि. यो तपाईं बारेमा कुरा गर्न केहि दिन्छ र तपाईं को दुई पहिले देखि नै साधारण कम्तिमा एउटा कुरा छ कि त्यहाँ आफ्नो पाल्तु जनावर छ कि एक व्यक्ति एक डेट मा सोधे भइरहेका छन् भने तपाईंलाई थाहा छ.
मुद्दा डेटिङ को आफ्नो शैली अन्ततः आफ्नो व्यक्तित्व र तपाईं सामान्य समाधान गर्ने निर्णय बाटो पनि गाँसिएको हुनेछन्. त्यो तपाईं पहिलो मिति प्राप्त गर्न कसरी निर्णय मदत गर्नेछ. तपाईं त्यहाँ एक पल्ट, सम्झना लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा कुराकानी प्रकाश राखन र यो तपाईं लाग्न सक्छ जहाँ यो तपाईं लिन अनुमति छ. किनभने यो केवल अन्त्यमा तपाईं को लागि सही व्यक्ति हुन सक्छ.